UMandela noMndeni kaBenjamin Pogrund
Umndeni wami uhlangabezane nomusa kaMandela. NgoJanuwari 1986, indodana yami, uGidonon, yayigubha i-bar mitzvah yakhe, umkhosi wamaJuda wokuya emadodeni eneminyaka eyishumi nesishiyagalolunye.
Ngangihambele uMandela ejele lasePollsmoor emasontweni ambalwa ngaphambili futhi ngamtshela ngakho. Kumelwe ukuba waya enkingeni ukuze athole iphepha lekhwalithi futhi wabhala inothi lezifiso ezinhle kuGideyoni. Eminyakeni emine kamuva, lapho uMandela ekhishwa ejele, ngamemela ngeLondon lapho sasihlala khona.
Ngemva kokumukela enkulumweni nganika uGideyoni ucingo owaqala ngokuthi 'Sawubona uMandela' - futhi emuva kwafika izwi elijulile, elikhukhumezayo, 'Kuyini lo Mnumzana Mandela? Ngibize uMalume uNelson. ' Yashiya uGideyoni ngezinkanyezi emehlweni akhe. Kamuva, uMandela waphuma ukuze ayosiza indodakazi yami uJennifer.
Wenza ukuba amjoyine emaqenjini omongameli wase-Afrika lapho, ngo-1991, wavakashela eNtshonalanga Afrika okokuqala ngqa eminyakeni engamashumi amathathu. Ube esefuna ukusekela i-ANC ngemuva kokuphuma eNingizimu Afrika. Manje wayenesimo sodumo futhi wabingelela ngokukhululekile.
Ukhiqize futhi uqondise idokhumenti mayelana nokuvakashelwa kwakhe, 'The Last Mile: Mandela, Afrika kanye Democracy'. Esinye isenzakalo samkhombisa esiqhingini sase Goree, ogwini lwaseDakar, lapho izigidi zezigqila zithunyelwe khona eMelika; futhi yayiqukethe izikhathi ezikhululekile nezomuntu siqu lapho ekhuluma ngokuphila kwakhe nethemba lakhe lentando yeningi-ukuza eNingizimu Afrika.